🥇 Mmemme maka ahụ ike
Mmemme maka ahụ ike
Video nke usoro ihe omume nke a mma osisi
Mee mmemme maka klọb mgbatị ahụ
Mma na ịdị mfe nke ọrụ akpaghị aka nke ụlọ ahụike bụ isi ihe ga-eme ka ụlọ ọrụ gị nwee ihe ịga nke ọma. Mmemme klọb anyị na-eme ka ị nwee ike ịme ihe ịga nke ọma na ịdị mfe nke ịza ajụjụ. Ntughari nke otutu ihe omume nke ulo ogwu na enyere ndi okacha amara nke ebe egwuregwu gi aka iru oru ma jikwaa oru ha, dika ndi isi na ndi nkuzi, ya na ijikwa ajuju nke ulo ogwu. Ngosipụta nke usoro mmezi nke ụlọ ọrụ ahụ ike nke nhazi usoro na nyocha nke ndị ahịa na-enye gị ohere itinye onye ahịa ọhụrụ site na iji otu ịpị nke òké ma ọ bụ lelee ma ọ bụrụ na enwere nkwekọrịta nkwekọrịta emere n'oge gara aga, ebe ị na-achịkwa usoro ahụ dum. Site na njikwa kwesịrị ekwesị nke klọb mgbatị ahụ na akụrụngwa ị nwere ike nweta ihe ịga nke ọma na azụmaahịa. Usoro nchịkwa akpaaka nke ụlọ nkwakọba ihe na njikwa ihe na-ahazi nyocha na klọb ahụ na-enye gị ohere ịdebe ndekọ nke ịkwụ ụgwọ ọrụ, lelee data na ụgwọ, ma ọ bụ mpaghara ọ bụla. Site n'enyemaka nke mmemme klọb mgbatị ahụ ị nwere ike ịhazi data gbasara otu, oge - ọ ga - enyere gị aka ị gbakọọ oke ọrụ nke ogige, usoro nke ndị ọkachamara, yana na ịgbakọ ụgwọ na njikwa ndị ọrụ ahụike.
Mmemme ọgbakọ nlekọta ahụike nke akụkọ akụkọ na njikwa nke nkọwa bụ ezigbo onye enyemaka nye onye na-akwụ ụgwọ gị. Nlekọta nke klọb ahụike ga-akpaghị aka. Iji mezuo nke a, anyị nwere ike ịnye usoro ịme ọzụzụ nke ga - enyere aka na ndị ahịa na - arụ ọrụ ma debe akaụntụ na klọb ahụike. Maka ịdị mfe nke ọrụ ị nwere ike iji kaadị pụrụ iche nwere akara mmanya, nke mmemme anyị maka klọb mgbatị ahụ na-enye ohere ịrụ ọrụ. Nke a na-eme ka nsuso nke ndị ahịa dị mfe, nke na-enyere aka idebe ndekọ ziri ezi nke data ịkwụ ụgwọ. Cheedị otú usoro ihe omume a si dị mma ma dị ọhụrụ! Nwere ike ibudata usoro ihe omume ahụ dị mma dị ka ụdị ngosi. Mmemme anyị nwere ike inye gị akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ maka klọb klọọkụ maka ahụike gị! Ọ na - enyere gị aka ijikwa ihe omume gị n'ụzọ dị mfe, sochie ego gị!
Nyocha a na - amalite mgbe niile site na ndị ahịa gị. Ndị ahịa bụ isi iyi nke ọdịmma gị. Ka ị na-elebara ha anya karị, otú ahụ ka ha na-eleta mgbatị gị ma na-ewetakwu ego. Eziokwu ahụ bụ na etiti gị na-etolite nke ọma gosipụtara na akụkọ pụrụ iche banyere mmụba nke isi ndị ahịa nke sitere na mmemme njikwa akaụntụ nke usoro akụkọ na njikwa ndị ọrụ. Ọ bụrụ na uto ahụ abụghị nke dị mma, tinyezie uche gị na akụkọ mgbasa ozi Ọ na - egosi etu ndị ahịa gị na - achọpụtakarị gbasara gị. Etinyela ego na usoro mgbasa ozi na-adịghị arụ ọrụ. E wezụga ịdọta ndị ahịa ọhụrụ, atụfula ndị ochie.
Nkwupụta pụrụ iche banyere ọrụ ndị ahịa na-egosi otu ndị ahịa si arụ ọrụ gị. Ga-enwe ike ihu ọnụọgụ nke ndị ahịa pụrụ iche maka oge ugbu a na nke gara aga. Iji dozie ibu ọrụ gị, ị ga-enwe ike ịhụ na akụkọ pụrụ iche nke ụbọchị na awa bụ oge eleta kachasị elu. Iji ghọta ikike ịzụta nke ugbu a site na enyemaka nke mmemme ahụ, ị ga-enwe ike iwepụta akụkọ "Nkezi ego". Mana n'ime ndị ahịa ọ bụla, enwere ndị kwụ ọtọ, ndị dị njikere imefu karịa, mana chọkwara nlebara anya pụrụ iche. Nwere ike ịchọta ndị ahịa dị otú ahụ na-ekwe nkwa site na ịmepụta akụkọ "Rating". N'elu ọnụego ndị ahụ ejirila ọtụtụ n'ime etiti gị, yana obere akara ahụ, ndị ahịa na-adịchaghị mma na-egosi ebe ahụ. Na mgbakwunye, ị ga-enwe ike ịdebanye aha ndị ji ụgwọ na mmemme ahụ, ma ọ bụrụ na ọ dị mkpa. Nke a dị mma. Ndị niile akwụbeghị ụgwọ klaasị zukọtara n’otu ebe. Ọ bụrụ na ị nwere netwọkụ alaka, ị ga-enwe ike ịtụle ma ngalaba na obodo. Ebee ka ị na-esi enweta ego kachasị?
Asọmpi na ụlọ ọrụ egwuregwu na-adịwanye ike. Mana ochicho udiri udiri oru ndia na acho kwa, ebe ndi mmadu n’acho icho ihe nzuzu na egwuregwu. Ndị a bụ usoro nke oge a. Iji bie ndụ na asọmpi dị otú ahụ, ọ dị mkpa ịkwalite azụmaahịa egwuregwu gị oge niile, soro ihe ọhụụ na teknụzụ ọgbara ọhụụ ma gbalịa mejuputa ya tupu ndị gị na ha na-eme. Ihe omume anyi bu oke ihe diri ndi choro ime ka ahia ha di nma ma nye ndi ahia ihe kachasi nma. Ihe omume USU-Soft bụ oge inyeaka n'ịhazi usoro na azụmahịa gị!
Enwere otutu ọrụ na-adọrọ mmasị, nke mmadụ nwere ike ịhọrọ ihe ga-adịrị ya mma. E nwere vets, ndị ọkwọ ụgbọ ala, ndị na-agụ kpakpando, ndị na-edozi isi na ihe ndị ọzọ. Otú ọ dị, ọ dị otu ọrụ pụtara ìhè ma na-ewu ewu ụbọchị ndị a. Anyi choro igosi na ndi choro choro taa, dika otutu mmadu choro ka ha di nma ma di nma. Nke a na-eduga n'eziokwu ahụ bụ na e nwere ọtụtụ klọb na-eme ahụ ike na-enye ọrụ egwuregwu. Yabụ, anyị nwere ike ihuba ụba nke ndị chọrọ ịbụ ndị nkuzi. Agbanyeghị, iji mee ka ụlọ ahụike gị bụrụ nke kachasị mma, ịchọrọ ndị ọkachamara ọkachamara. N'ụzọ dị mwute, ọ na-esiri ike ịghọta ma nyochaa onye ọrụ nwere ike n'oge mkparịta ụka. N'ụzọ dị mwute, e nwere ụzọ isi mee ya na mmemme USU-Soft, nke na-enyocha ịdị irè nke ndị ọrụ dabere na ọtụtụ mpaghara. Isi njirisi bụ ego arụ ọrụ, yana nzaghachi sitere n'aka ndị ahịa na akara na ndepụta nke ndị ọrụ kacha mma.